Faah faahin: Amiiro iyo xubno kale oo Shabaab oo lagu qabtay Gaalkacyo – AfmoNews
Faah faahin: Amiiro iyo xubno kale oo Shabaab oo lagu qabtay Gaalkacyo
Taliyaha Qaybta Booliska ee Gobolka Mudug ee dhinaca Puntland, Muumin Cabdi Shire ayaa ka hadlay hawlgal uu sheegay in lagu soo qabtay Amiiro iyo xubno kale oo ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Taliyaha ayaa sheegay in hawlgalo laga sameeyay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo lagu soo qabqabtay xubnahaasi, oo tan iyo sanadkii 2018 dilal ka gaysanayay magaalada.
“Waxaan qabanay laba shabakadood oo ka koobnaa toban qof iyo labadii Amiir ee xukumayay, kuwaa oo illaa 2018-kii intaan ognahay fuliyay dilalkii ka dhacayay Magaalada Gaalkacyo.” Ayuu yiri Taliyaha oo galabta la hadlay BBC.
Taliyaha ayaa yiri “Hadda waxaan gacanta ku haynaa toddobo xubnood iyo shan baxsaday, oo gacanteena aan weli ku jirin.”
Dhammaan xubnaha gacanta lagu hayo ayuu sheegay inay yihiin dhalinyaro yar yar oo deegaanka ah, kuwaa oo sida uu sheegay la duufsaday.
Sidoo kale waxa uu sheegay in xubnaha la hayo ay qirsan yihiin dembiyadii ay gaysteen, isla-markaana ay u gudbin doonaan sharciga, si loogu qaado ciqaabta ay muteystaan.
Taliye Muumin ayaan marnaba meesha ka saarin inay jiri doonaan xubno kale oo ka tirsan Al Shabaab, kuna sugan Magaalada Gaalkacyo, balse ay ka hawlgeli doonaan, una soo qaban doonaan, si lamid ah sida kuwaanba ay gacanta ugu soo dhigeen.